छापे कालकोठरी "Baradin होल्ड" सबैभन्दा PVP सामग्री स्तर 85 को सबै अन्वेषकहरूको लागि सान्दर्भिक मानिन्छ। एक खेलाडी "Cataclysm" को साथै को पम्पिंग चरण मा समाप्त भने, उहाँले नियमित यो स्थान भ्रमण गर्नु पर्छ।
यो छापे स्तर 85 उपलब्ध छ र तीन मालिकहरुलाई को हत्या समावेश छ। अक्सर, खेलाडीहरू पूर्ण 25-मानिस छापे कालकोठरी सङ्कलन छैन। "Baradin होल्ड" 18 मानिसहरू को एक समूह द्वारा पूर्ण बाहिर मिलेका गर्न सकिन्छ, यदि छैन कम 329 भन्दा औं आफ्नो उपकरण स्तर। अक्सर, खेलाडीहरूलाई बस अन्तिम मालिक मा राम्रो उत्पादन प्राप्त गर्न, कुरा मात्र होइन लुगा अक्षरहरू को बहुमत बाँकी रुचि हो किनभने जानुहोस्। खातामा यो वास्तवमा लिएर, यो मुख्य मालिक Alizabel मा युद्धको रणनीति अध्ययन गर्न मात्र रहन्छ, र तपाईं सुरक्षित युद्धमा जाने गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चरण मा, सबै ट्यांक नजिकै एक सर्कल सँगै चलाउनुहोस्। त्यहाँ बाहिर जाने छैन राम्रो छ जसको लागि एक लेबल अन्यथा वर्ण क्षति को एक ठूलो रकम प्राप्त गर्नेछ, छ। आफु मा आक्रमण राख्न - हाकिम कोठा वरिपरि कताई सुरु गर्दा, डाक्टर को नायक द्वारा मारा सबैको स्वास्थ्य र आक्रमण बाँच्न सक्ने क्षमता पुनर्स्थापना सबैभन्दा छन्। त्यसपछि एक मानक चरण पुनरावृत्ति छ। सबै एक थुप्रो सँगै चलाउन, क्षति र स्क्याटर अधिकतम रकम राख्न प्रयास गर्नुहोस्। ठ्याक्कै धावा "Baradin होल्ड।" Traversed
एक छापे कालकोठरी कसरी पाउन?
यो छापे पारित गर्न, तपाईँले पहिला संसारको नक्सामा ठ्याक्कै जहाँ प्रवेश थाहा हुनुपर्छ। Azeroth मा, पूर्वी राज्यहरू को मुख्य भूमि नजिकै त्यहाँ TOL Barad नाम गरेका एक द्वीप छ। यो PVP स्थान जहाँ लड दिन को कुनै पनि समय दिनुभयो। इलाका को गिरोह र गठबन्धन बीच विभाजित छ, र स्वास्थ्य र आक्रमण धेरै यसको कुलीन योद्धाहरू सुरक्षा। द्वीप नै प्राप्त गर्न, तपाईँले पहिला Orgrimmar र Stormwind मा एक Teleport फेला पार्न आवश्यक छ। यसलाई क्लिक पछि वर्ण TOL Barad गुट मा नियन्त्रण बिन्दु हस्तान्तरण गरिनेछ। कि पछि, पुल भन्दा, सबै शत्रु गार्ड बाइपास, क्षणमा यो विरोध गुट नियन्त्रण यदि चल्दैन। "Baradin किल्ला" नयाँ स्थान को केन्द्र मा खडा हुनेछ। त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्न - प्रश्न यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ भन्दा सजिलो छ। को गढ को सही पक्षमा तहखाने मा एक ठूलो ढोका छ। त्यो सधैं खुला छ, र बाहिर द्वारा लक र प्रमुख अन्तर्गत कोठा मा अग्रणी एक टनेल भित्र। को तहखाने को बीचमा एक विशाल हरियो पोर्टल पत्ता मा, त्यो "Baradin किल्ला" RAID गर्न ढोका छ।
तहखाने मा तपाईं के प्राप्त गर्न सक्छन्?
धेरै खेलाडीहरू के एक निश्चित सामग्रीको पारित उत्पादन हुनेछ पहिलो स्थान, रुचि राख्नुहुन्छ। यो स्तर 85 मा पास छापे सबै विवरण को ज्ञान बिना कठिन पर्याप्त छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। हामी खातामा नवीनतम एड-मा "रोमी पल्टनमा" ले भने, वर्ण स्तर 110 तपाईं यसलाई एक्लै कुनै पनि समस्या बिना गर्न सक्नुहुन्छ। को धावा कालकोठरी वाह «Baradin होल्ड" मा मुख्य शिकार वर्ण को सबै वर्ग लागि उपकरण छ। एक खेलाडी लागि अधिकतम स्तर यसलाई चासो छ मात्र उनको transmogrification गर्न (को नजर परिवर्तन) ले, वा समग्र स्तर केही उपलब्धिहरू थप्दा गर्न।
कल अफ ड्युटी: युद्ध मा विश्व - र रहस्य को खण्ड
खेल Trove: त्रुटि 2025. म के गर्नुपर्छ?
ऊन chevrons - यो सिर्फ छ
पुरुष कन्या रोस्टर कुखुरा: विशेषताहरु र व्यक्तित्व लक्षण
कसरी चरणमा एक केटी एक पोर्ट्रेट आकर्षित गर्न?
किन जहाज छन्? आर्किमिडीज बताउँछन्
जो टेलीग्राफ आविष्कार? के वर्षमा यो भयो?